बागलुङ सेवा समाज कतारको १० औ अधिवेशन तथा साँस्कृतिक कार्यक्रमको तयारि पूरा ! – ebaglung.com
बागलुङ सेवा समाज कतारको १० औ अधिवेशन तथा साँस्कृतिक कार्यक्रमको तयारि पूरा !
२०७४ चैत्र ११, आईतवार १४:५२	Top News, थप समाचार
खगेन्द्र विश्वकर्मा, बागलुङ २०७४ चैत ११ । ‘बागलुङबासीको चाहाना स्वदेशमा शान्तिको कामना’ भन्ने नाराका साथ बागलुङ सेवा समाज दोहा कतारको १० औ अधिवेशन तथा साँस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने अन्तिम तयारि पूरा गरेको अध्यक्ष चन्द्र कान्त शर्मा केदारले जानकारी दिए।
बागलुङ सेवा समाज दोहा कतारको दसौं अधिबेशन २०१८ मार्च ३० मा राष्टि«य कलाकारहरु वसन्त थापा, शान्ति श्री परियार, खगेन्द्र विश्वकर्मा, देवीका केसी, युवराज छन्त्याल, रितकुमार श्रेष्ठ लगायत लाईभ दोहोरी गीतको साथमा अधिवेशन संगै सांगीतिक कार्यक्रम संयोजक रमेश भट्टले बताए ।
कार्यक्रम ३० मार्च २०१८ शुक्रवार गल्फ होराईजन होटल फिलिपिन मार्मेट नजिकै बिहान १० बजे देखि सुरु गर्ने कार्यक्रम छ । प्रबेश शुल्क कतारी रियाल ५० (पचास) रहेको छ । संस्थाले हल व्यवस्थापन अतिथि सत्कार टिकट विक्रि तथा ब्याज व्यानर लगाएतका सम्पुर्ण तयारि पुरा भएको उपाध्यक्ष नगेन्द्र पौडेलले बताए ।
बागलुङ सेवा समाज प्रवासी नेपालीहरुको बलियो र गौरवमय संस्था भएको र यश संस्थाले बागलुङमा भएका विभिन्न दैविक विपत्ति तथा विभिन्न समस्याहरुमा सहयोग गर्दै आएको छ । कतारमा हुने विविन्न नेपालीको समस्या तथा घरपरिवारको अत्यास मेटाउन विभिन्न मनोरन्जनात्मक कार्यक्रम र भलिबल खेलमा सहभागी भै विभिन्न पुरस्कार जितेर बागलुङ छवि उच्च बनाउदै गएको छ ।
१० औ अधिवेशनले पनि संस्थाको गरिमालाई उच्चबनाउने सक्षम नेतृत्व आउनेमा शंका छैन ।
दुबैको राजी खुशीले कामकुरो सकिए नि, पछि जबरजस्ती भनिदिए भैगो नि … ?